Thenga iNintendo DS Lite eSpain -Geofumadas
NgoNovemba, 2009 Internet kunye neBlogs
Kwi-Intanethi kukho iintlobo ngeentlobo zeevenkile, apho kunokwenzeka khona ukuba uthenge izinto zokudlala zetekhnoloji, kubandakanya uninzi olunenkxaso ngeSpanish. Kodwa iindleko zokuhambisa kunye neemeko zewaranti ezingalungelelaniswanga kubume bolawulo lwasekhaya zenza ukuba uphoswe zibonelelo zevenkile eziqhelekileyo.
Ukusombulula ukuba kukho MicroCubo.com, Inkampani ekwi-Intanethi ezinikele kwintengiso yezixhobo kunye nomthengi wefektri ngqo. Ukusekwa eSpain, izibonelelo zinikezelwa kwimeko yesizwe, umzekelo: Abayi kukuthengisa iselfowuni ngeplagi engaxhaswanga okanye engenakunxibelelana nababoneleli ngaphakathi kweli lizwe. Masibone ke ukuba yintoni enye iMicroCubo ebonelela ngayo:
Ukuthenga kuyo nayiphi na ivenkile esekwe e-China okanye e-United States kuyakubiza ubuncinci beedola ezingama-24 ngeendleko zokuhambisa ngenqanawa. Ukuba useSpain, iMicroCubo iyizisa emnyango wendlu yakho ngaphandle kwentlawulo, ayizukubandakanya iindleko zangaphandle zokungena kweli lizwe.
Okwangoku i console Nintendo DS Lite I-90 €, kunye ne-VAT ifakiwe, kwaye ke, ukuthunyelwa kwamahhala.
Intlawulo kunye nokuthumela ngokukhawuleza
Endaweni yeeveki ezimbini okanye ezintathu ezinokuthatha ukuthunyelwa kwezinye ivenkile, ukusondela kweMicroCubo kuyabavumela ukuba bayithathe phakathi kweentsuku ezi-3 ukuya kwezi-5. Iindlela zokuhlawula zikwasebenza, ngesango elikhuselekileyo likaLaCaixa nekhadi lakho letyala okanye ledebhithi nakweliphi na iziko, bayayixhasa iPaypal kwaye ikwakhona indlela oyihlawula ngayo ikhuriya wakube uyifumene imveliso.
Isiqinisekiso ngokwemithetho yaseSpeyin
Ukongeza kwiiqinisekiso ezisungulwe ngumenzi, njengenkampani eyenziwe eSpeyin, iMicCubo kufuneka ihloniphe iziqinisekiso ze-23 / 2003 Law; yintoni na enye inkampani eyenziwe ngaphandle ngaphandle.
Indawo yile: MicroCubo.com
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iifutshane zeGoogle Chrome
Post Next Faka imibala ebonakalayo kwimifanekisoOkulandelayo »
Iimpendulo ezimbini "Thenga iNintendo DS Lite eSpain"
I-Galaxy s6 ityala uthi:
Intle, siyabonga ngolwazi.
r4 rts uthi:
Ndiyabonga kakhulu ngenxalenye yakho!